Myndigheter Hay’adaha - Ängelholms kommun
Du är här: Startsida / Other languages / Ku soo dhawoow degmada Ängelholm / Myndigheter Hay’adaha
Kaalmooyinka dhaqaale – Försäkringskassan
Waxaad halkaan la xiriireysaa marka aad codsaneyso lacagta carruurta, kaalmada kirada lagu kabo, lacagta waalidka, kaalmada masruufka oo waajibka ku ah waalidka midkood iyo waxyaalo kale oo badan. Waxaa suurtagal ah in laguu qabto kulan telefoonka ah oo lagu
bixiyo luuqado kala duwan oo ay ka mid yihiin carabiga, soomaaliga iyo tigriinya.
0771-52 45 24
Shaqo – Xafiiska shaqada
Kadib marka aad hesho sharciga degganaanshaha waxaad la kulmeysaa hawlwadeen xafiiska shaqada oo qaabbilsan meeleynta oo isku ururinaya aqoontaada waxbarasho iyo waayaaragnimadaada shaqo.
Xafiiska shaqadu wuxuu fursad fiican kuu siinayaa sidii aad dhaqso ugu baran lahayd afiswiidhishka, ama shaqo ugu heli lahayd oo aad masruufkaaga u la soo bixi lahayd.
Durbadiiba marka aad hesho sharciga degganaanshaha ama aad soo degto degmo, ayuu xafiiska shaqadu ku la yeelanayaa waraysi lagu qorsheeyo sidii laguu meeleyn lahaa. Waraysigaas meeleynta oo marar badan la qaban karo, waxaa lagu bilaabayaa inaad adiga iyo hawlwadeen xafiiska shaqadu isla qorsheysaan mustaqbalkaaga Iswiidhen. Qorshaha meeleynta waxaa ku sharraxan hawlaha aad ka qaybqaadaneyso si aad dhaqso ugu hesho shaqo.
Arbingatan 1 i Ängelholm
Lambarka aqoonsiga – Hay’adda canshuuraha
Dhammaan dadka ku nool Iswiidhen waxay ku jiraan diiwaan lagu magacaabo diiwaanka guud ee dadweynaha. Diiwaanka guud ee dadweynaha waxaa ku qoran dhammaan magaca qof qalba, adareeskiisa, lambarkiisa aqoonsiga, iyo magaca qofka ay isqabaan, carruurta iyo
Dhammaan dadka joogto u deggan Iswiidhen waxaa loo sameeyaa lambar aqoonsi oo ka kooban toban lambar. ssbbmm-xxxx. (sannad, bil, maalin, afar lambar oo qofka u gaar ah).
Haddii aad dhowaan timid waxaad u baahan tahay in marka sharciga degganaanshaha lagu siiyo aad u tagto Hay’adda canshuuraha oo iska diiwaangeliso oo aad ka samaysato lambar aqoonsi. Haddii aad tihiin qoyska dad badan ka kooban, waa inaad dhammaan isu raacdaan Hay’adda canshuuraha.
Hay’adda canshuuruhu waxay saldhig ku leedahay aqalka xafiisyada ah oo ku yaal waddada
Polisgatan 4 ee Ängelholm. Haddaad dooneyso inaad dalbato kaarka aqoonsiga, waxaad u baahan tahay inaad u safarto xafiiska hay’adda canshuuraha oo ku yaal Helsingborg (Carl Krooks gata 24).
Hay’adda socdaalku waa hay’ad wax ka qabata codsiyada dadka doonaya in ay degaan Iswiidhen, ama booqasho ku yimaadaan, ama doonaya in magangelyo laga siiyo cadaadis, ama in ay dalbadaan jinsiyadda Iswiidhen. Hay’adda socdaalku waxay codsi walba wax uga
qabataa si waafaqsan xeerarka ku saabsan dadka soo gala Iswiidhen. Shaqadooduna waxay tahay in ay hubiyaan in wax waliba u hirgalaan hab waafaqsan xeerarka degsan.
Hay’adda socdaalku waxay dad badan siisaa magangelyo ay kaga nabadgalaan cadaadis iyo dagaalo. Waxaa hawlahooda ka mid ah in ay qaabbilaan dadka dalka u yimaada in ay magangelyo ka codsadaan oo ka badbaadaan dhibaatooyin dagaal iyo in ay ilaaliyaan xuquuqda ay u leeyihiin badbaadin. Iyadoo la shaqeyneysa hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobey waxay caawintaa dadka qaxooti ah oo ku sugan dunida dacaladeeda in ay nolol cusub ka bilaabaan Iswiidhen.
Dadka badan oo Iswiidhen soo dega ayaa doonaya in ay qaataan jinsiyadda Iswiidhen. Markaas waxaad la xiriireysaa Hay’adda socdaalka. Sannad walba waxay tiro dad ah oo badan qaataan jinsiyadda iswiidhen. Jinsiyaddu waxay qofka siisaa xuquuq badan, oo ay mid tahay in ay ka qaybgalaan doorashada baarlamaanka.
0771-23 52 35